Electric ma ọ bụ Steam Okpomọkụ Hot Air Food Ihicha Machine - China Qingdao Otu ebe Machinery
Electric ma ọ bụ Steam Okpomọkụ Hot Air Food Ihicha Machine bụ karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na ihicha ọrụ anụ oriri na ngwaahịa mgbe elu okpomọkụ nwoke ịga ụlọ ọgwụ, akwukwo nri ngwaahịa, obere plastic ngwugwu ngwaahịa ma ọ bụ agụụ ngwugwu ngwaahịa. The nri na-etinye na igwe anaghị agba nchara na ihuenyo belt (nke a mere 12-60 ntupu anaghị agba nchara net), ihuenyo belt na-akpụ akpụ pụta na azụ na ihicha igbe. Isi kpo oku usoro bụ electric kpo oku, uzuoku kpo oku na-ekpo ọkụ ikuku kpo oku. Na-ekpo ọkụ ikuku nwere ike ịga ...
Electric ma ọ bụ Steam Okpomọkụ Hot Air Food Ihicha Machine bụ karịsịa kwesịrị ekwesị n'ihi na ihicha ọrụ anụ oriri na ngwaahịa mgbe elu okpomọkụ nwoke ịga ụlọ ọgwụ, akwukwo nri ngwaahịa, obere plastic ngwugwu ngwaahịa ma ọ bụ agụụ ngwugwu ngwaahịa.
The nri na-etinye na igwe anaghị agba nchara na ihuenyo belt (nke a mere 12-60 ntupu anaghị agba nchara net), ihuenyo belt na-akpụ akpụ pụta na azụ na ihicha igbe. Isi kpo oku usoro bụ electric kpo oku, uzuoku kpo oku na-ekpo ọkụ ikuku kpo oku. Na-ekpo ọkụ ikuku nwere ike na-aga site gaps nri, uzuoku na-ṅụsịa si mmiri iyuzucha oghere. The ihicha igbe bụ mejupụtara ọtụtụ akụkụ, ọ bụrụ na chọrọ ịzọpụta ohere, na kpo oku akụkụ nwere ike dị ka multi oyi akwa ụdị. The ogologo nso 6-40m, nti obosara bụ 0.6-3m.
Previous: Pickled Akwukwo nri nhazi Machine Line
Osote: Water Bath Ịgba Mmiri ara ehi Pasterization Machine
ikuku ihicha igwe
banana ibe agụụ frying igwe
akpu frying igwe
ọkụkọ frying igwe
ibe frying igwe
na-aga n'ihu frying igwe
miri frying igwe
egg frying igwe
egg ngwaahịa nhazi akara
azụ frying igwe
nri ikuku ihicha igwe
nri mgbanwe akpa ikuku ihicha igwe
nri ngwugwu ihicha ihicha igwe
nri ngwugwu ike oyi ikuku ihicha igwe
nri ngwugwu elu ikuku ihicha igwe
french fries frying igwe
mkpụrụ osisi na akwukwo nri ihicha igwe
mkpụrụ agụụ frying igwe
frying ibe igwe
frying igwe snacks
frying igwe nri nri
gari frying igwe
ulo oru frying igwe
KFC frying igwe
yabasị frying igwe
ahụekere frying igwe
plastic akpa ngwugwu draya
Ezi akpụkpọ frying igwe
nri nri frying igwe
agụụ frying igwe
agụụ frying igwe price